Ebumnuche 10 iji jiri Flowblade dịka onye ndezi vidiyo | Site na Linux
Ebumnuche 10 iji iji Flowblade dịka onye ndezi vidiyo
Na ahịa enwere ọtụtụ mmemme nwere ike inyere gị aka na ọrụ gị dị iche iche, n'ihe banyere edezi vidiyo enwere ọtụtụ nhọrọ, dịka Flowblade nke bu ihe ijuanya na oru oma na Linux.
1 Gịnị bụ Flowblade?
2 Etu esi etinye Flowblade
2.1 Wụnye Flowblade na Ubuntu, Debian na Linux Mint
2.2 Wụnye Flowblade na Archlinux
3 Ebumnuche 10 iji iji Flowblade dịka onye ndezi vidiyo
3.1 Flowblade bụ fechaa
3.2 Flowblade bụ otu ihe na Simplicity
3.3 Flowblade nwere oke vidiyo
3.4 Flowblade nwere mmetụta ọdịyo
3.5 Flowblade atụmatụ ezigbo ire ụtọ
3.6 Flowblade na-ejide echiche Drag na Drop
3.7 Flowblade nwere nhọrọ iji nye
3.8 Flowblade nzọ na Ogologo oge
3.9 Flowblade dị ọsọ ọsọ
3.10 Flowblade kwụsiri ike
Gịnị bụ Flowblade?
Flowblade na-bụ nchịkọta akụkọ vidiyo maka Linux wepụtara n'okpuru ikike GPL 3.
Flowblade Ezubere ya iji nye ahụmịhe edezi ngwa ngwa, nke ziri ezi, ma sie ike, ebe o nwere ngwaọrụ dị ike maka ịgwakọta na nzacha ụda na vidiyo.
Etu esi etinye Flowblade
Can nwere ike iwunye Flowblade cloning ya ukara repository, wụnye mkpa dependencies na-agba ọsọ na Mbido.py
git mmepụta oyiri https://github.com/jliljebl/flowblade.git
Easiestzọ kachasị mfe iji wụnye Flowblade na-eji mbipute emelitere nke nchekwa nke ọkacha mmasị gị na-ekesa. Ihe na-adịghị mma bụ na mbipute dịnụ nwere ike ọ gaghị abụ ụdị nke kachasị ọhụrụ.
Wụnye Flowblade na Ubuntu, Debian na Linux Mint
sudo apt-nweta wụnye flowblade
Wụnye Flowblade na Archlinux
Nke ikpeazụ. Gaa na peeji nke AUR ma ọ bụ jiri iwu na-esote na ọnụ:
Git mbipute. Gaa na peeji nke AUR ma ọ bụ jiri iwu na-esote na ọnụ:
Y’oburu n’onye anwa anwa nwaa Flowblade, lee ihe iri nke Seth Kenlon dere ihe kpatara iji kwado Flowblade:
Flowblade bụ fechaa
Ọ bụ ngwa dị oke ọkụ, nke abụghị ihe a na - ahụkarị n'etiti ndị editọ vidiyo. Nke a nwere ike iduhie maka ngwa Linux, n'ihi na Flowblade bụ isi njedebe maka MLT na FFmpeg ma hazie ya maka igbutu vidiyo. O nweghi ihe mgbakwunye 20 ọzọ metụtara naanị vidiyo vidio.
Njirimara na o nwere nwere a ogologo ndepụta nke chọrọ na a video nchịkọta akụkọ omume ga-enwe. O nwere ihe ndi mmadu na-egbutusi, ihe omuma nke ihe omuma, ufodu ihe di nfe na igodo ya, na mbupu ya.
Flowblade bụ otu ihe na Simplicity
Ndị editọ vidiyo na-enwekarị aha maka ịdị mgbagwoju anya, mana isi ọrụ Flowblade niile dabara nke ọma na bọtịnụ 10 dị n'etiti ogwe aka. Enwekwara bọtịnụ ndị ọzọ iji kọwaa ọrụ ahụ (mbugharị na-apụ, mee ma megharịa), mana imirikiti mmemme ahụ dabara na ogwe mmiri.
Iji melite ya, ọrụ ndị bụ isi nwere ụzọ mkpirisi keyboard. Yabụ mgbe ị matara ngwa ọrụ a, usoro mmezi ga-adị ụtọ ma dịkwa ụtọ. Ọbụlagodi na ịnwere obere oge iji mmemme ahụ, Flowblade ga-enye gị ohere ịnyagharịa ọtụtụ oge vidiyo ma mechaa ya. Nke a na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ndị editọ kachasị mfe.
Flowblade nwere oke vidiyo
Ọ na-erite uru site n'otu setịpụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị editọ vidiyo Linux: Frei0r. Nke pụtara na ị ga-eketa otu mmetụta vidiyo na-akpaghị aka nke ederela ma dị njikere ịga, yana iji ikpo okwu enyi nke Flowblade. Ga-enwe ọtụtụ nhọrọ ịhọrọ.
Flowblade nwere mmetụta ọdịyo
Ọtụtụ ndị anaghị echegbu onwe ha dezie ụda na nchịkọta akụkọ vidiyo. Somefọdụ na-eme ya n’ihi na ọ bụ oge ha na ndị ọzọ n’ihi na ha enweghị usoro omume nke ihe nchịkọta akụkọ ọdịyo. Ya mere, ọ bụghịkarị ndị editọ ịjụ ma ngwa a nwere opekata mpe otu igwekota ụda.
Wellblade nwere ya. O nwere igwekota olu doro anya na mgbakwunye ole na ole dị ka panning na swapping channel. N'uche m, ọ nwere otu n'ime sistemụ keyframe kachasị dị mfe ma dị mma iji. Ọ dị mfe, kensinammuo ma dị irè n'ihi na ị nwere ike ịnụ mgbanwe ahụ ozugbo.
Flowblade atụmatụ ezigbo ire ụtọ
Ọ na-arụ ọrụ nke ọma n'okpuru usoro ihe atụ nke "ka anyị nwalee mmetụta a ugbu a ma hụ ihe mere." Chọpụta, ọ bụrụ na ị tinye a otutu mmetụta ị kwesịrị ị na ike a nwa oge ijere nke clip ka n'ụzọ kwesịrị ekwesị na-anụ ụda mmetụta, ma dị ka a ngwa ngwa akwụkwọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Flowblade na-ejide echiche Drag na Drop
Flowblade bụ onye nchịkọta akụkọ ọdịnala, dịka enyi na enyi dị ka ịdọrọ vidiyo ma dobe kama notepad. Ọ ga-ekwe ka ị ga-esi na gị usoro iheomume, pịa na ịdọrọ mkpachị gburugburu.
Ihe ndezi a na-eji otu asụsụ eme ihe. Ọchịchị dị n'aka ekpe, nke ghọrọ ihe ama ama: mgbe agbakwunyela obere ihe na ndabara, ọ na-abanye n'ime nkedo aka ekpe ya. Agbanyeghị, iji nhichapụ cursor, ịnwere ike ijide ihe osise ma bugharịa ya n'ebe ọ bụla na usoro iheomume ịchọrọ. A na-achaju ntụ na-apụta n'etiti clip gị na ihe ọ bụla dị n'aka ekpe ya, iji mimomie ụdị akwa celluloid base.
Flowblade nwere nhọrọ iji nye
Ebe ọ bụ na Flowblade jiri FFmpe na MLT dị ka teknụzụ ntọala ya, enwere ọtụtụ nhọrọ maka ịnyefe ọrụ gị. Nwere ike iji UI wuru ewu maka ịsụgharị, nke ga - eme ka ndabara dakọtara ọtụtụ ntọala ọrụ ahụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ị ga - akpagbu ntọala ụfọdụ, na ngalaba dị n'aka nri.
Flowblade nzọ na Ogologo oge
Ruo ọtụtụ afọ, mmemme ndezi vidiyo emeela ka agwaetiti.
Formatsfọdụ formats na-kennyeghari, e nwere ọnyà mkpebi anatara ma ihu ọma ị na-rapaara na video nchịkọta akụkọ ị họrọ. Yabụ, ị nwere ike ịkwụsị ọrụ gị niile ma ọ bụrụ na akwụsịla ngwa ọrụ ahụ ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ gbanwere usoro ahụ.
Flowblade na-echekwa nka gị, site na iji usoro MLT, ụkpụrụ na oghere mepere emepe ị gaghị efunahụ ọrụ mmezi gị. A oru ngo nke ị dezie taa ga-anọgide na-adị ruo ọtụtụ afọ ma ị nwere ike ibufe ya na-enweghị nsogbu. Nke a apụtaghị na ị nwere ike imeghe faịlụ gị na nchịkọta akụkọ ọzọ dị ka a ga - asị na mmemme niile kwuru otu asụsụ ahụ, mana ọ bụrụ na ha ejigide ọrụ ọhụụ, na - enweghị mkpa maka mmemme ndị ọzọ iji tọghata faịlụ ahụ ka ọ daba.
Are bụ onye nwe ihe ọmụma gị na mmemme ahụ nke nyeere gị aka ịmepụta ya, nke ahụ bụkwa otu n'ime uru nke teknụzụ ọgbara ọhụrụ.
Flowblade dị ọsọ ọsọ
Ọ bụ mmemme ngwa ngwa. Ọ bụghị na ọ na-arụ ọrụ dị iche karịa ndị editọ vidiyo ndị ọzọ, mana ọ naghị eme ihe ọ bụla iji belata ya. Ọ bụ a anabata ozi na obi ụtọ iji.
Flowblade kwụsiri ike
Ihe omume a bu ihe mmetuta, karie ihe akuko na intaneti nwere ike ikwu. Otu ụzọ iji tụọ mmetụta a bụ ụjọ ị nwere ike inwe mgbe ị ga-emepe ngwa ọrụ ma ọ bụ tupu ị nye ndụmọdụ. Ọ bụrụ na ị nwere ike izo aka na ya na anya gị mechiri emechi, mgbe ahụ ọ na-ezute njirimara a ma bụrụ ya na Flowblade.
Naanị nke ahụ niile, enwere m olileanya na ihe ndị a ga - enyere gị aka inye ngwa ọrụ a ohere, nke doro anya na ọ magburu onwe ya ma anaghị enwere ndị ọzọ anyaụfụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ebumnuche 10 iji iji Flowblade dịka onye ndezi vidiyo
Daalụ maka isiokwu ahụ, ị ​​na-efu ihe ntakịrị na ịwụnye site na git, ebe ọ bụ na mkpokọta ubuntu dịla agadi (mbipute 0.14) yana ntuziaka ndị dị mfe iji mepụta git na-agba ọsọ setup.py ezughi ezu ma ọlị (ntọala .py chọrọ arụmụka).
Na setup.py ha na-aga file /home/guillermo/git/flowblade/flowblade-trunk/docs/INSTALLING.md ebe, oburu na inwere nkesa ngalaba DEBIAN, Ubuntu, ... ha gwa gi ka ibudata ngwugwu .deb na ị wụnye ya na ọnụ:
Ejiri m GDebi wụnye ya mana mgbe m nwetara ozi ahụ na m nwere nsụgharị na repository ahụ, agara m ya na synaptic wee gbochie mbipute nchekwa ahụ, emesịa ọ hapụrụ m ka m wụnye nsụgharị ọhụrụ nke flowblade na gdebi.
Abụghị m onye na-emepụta ihe mana ana m eji ụfọdụ ngwaọrụ edezi. Ruo ugbu a, m ejirila Open Shot. Kedu ihe ga-aka mma ma ọ bụ nwee ntụsara ahụ iji mee ihe?
Zaghachi Mauricio Gómez
Ogo m hụrụ n'anya Onye Nhazi vidiyo a ỌZỌ M NA-EME M KWES ITR IT YA 100%
NA Spanish ..
Budata ya na OZI OWU OZI .. https://jliljebl.github.io/flowblade/download.html
Zaghachi na MANUEL BLANCO MONTERO
Oge iji nwaa onye nhazi ọhụrụ !!!
M na-ejikarị KDEnlive (dị ike) na Lightworks (ezutere m ya n'oge na-adịbeghị anya) ma ha na-arụ ọrụ nke ọma.
Ọ bụ ezie na m na-ejikarị Windows, onye nchịkọta akụkọ a dọtara uche m. Ọ nwere ụfọdụ quirks, ụfọdụ nkọwa mgbe edezi, nke bụ a bit mgbagwoju anya na mbụ, ruo mgbe ị ga-ikowe nke ya. Ma ọ bụghị ya ọ na - adị m mma karịa n'ihi ịdị mfe ya na ike ọ nwere.
Dịkwuo ike karịa emepehothot na kdenlive, ọ na-agba ọsọ ọsọ ma na-akacha.
Mgbasa ozi Rafa Mar dijo
A hụrụ na otu n’ime isi ihe Linux bụ ndị ndezi vidiyo, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na m jisiri ike na-arụ ọrụ na kdenlive mgbe ụfọdụ ọ na-arapara ntakịrị. Ma ihe a na-agagharị na ya bụ ihe ọchị, mgbe m nwara ya ọnwa ole na ole gara aga, achọpụtara m na ọ na-adọrọ mmasị ma m kwere nkwa ide ụfọdụ nkuzi na ngwa a ka m na-eme kdenlive ọnwa ndị a, ugbu a ọ tụgharịrị na na mint m wụnye ụdị mbipute ọ bụ 0.14 , mgbe ịwụnye ụgwọ nke 1.16 ọ na-enye m njehie nke ntụkwasị obi na mgbe ị na-eme nkwụnye -f iji dozie ha ihe ọ na-eme n'iwepu ngwa ahụ (ọ fọrọ nke nta ka m jiri iwe na-achị ọchị n'akụkụ ebe a), yabụ ana m aga flatpak, ana m enweta wụnye 1.16 na mgbe m malitere oru ohuru na 1080i 25f ma buru vidiyo nke nkeji ole na ole iji bido rụọ ọrụ mmemme ma ọ bụ daa, ma ọ bụ ọ mechie, na ihe kacha dọta uche m, ebe nchekwa ahụ, 16Gb Ọ na-eri ha niile tinyere 4 swap ... enwekwaghị m ọchịchọ ịme ihe ọ bụla na ngwa a, ọ bụ kaos dị ka emepe. Naanị otu onye taa na linux nke m jisiri ike rụọ ọrụ dị iche iche na kdenlive.
Anaghị m akwado ya onye ọ bụla, o nyela m ihe kpatara 1 iji chefuo ya, enweghị ike na nnukwu oriri nke ihe onwunwe.
Zaghachi Rafa Mar Multimedia